चीन भौं पेन्सिल मेकअप निजी लेबल लामो चिरस्थायी शाकाहारी भौं पेन्सिल माइक्रो पेन कारखाना र आपूर्तिकर्ता | आइरिस ब्यूटी
भौं पेन्सिल मेकअप निजी लेबल लामो चिरस्थायी शाकाहारी भौं पेन्सिल माइक्रो पेन
अल्ट्रा-फाइन टिप वाटरप्रूफ मेकानिकल भौं पेन्सिल, चिल्लो र रेशमी। भौं पेन्सिल साना ब्राउ कपाल कोर्दछ। आँखा ब्राउज आकार निश्चित रूपमा परिभाषित गर्दछ।
हाम्रो अल्ट्रा पातलो माइक्रो आईब्रो पेन्सिलको साथ पूर्ण सुन्दर ब्राउजहरू बनाउनुहोस्। यो माइक्रो ब्राउउ पेन्सिल यति सटीक छ, यसले प्राकृतिक देखिने फिनिशको लागि र colorको साथ राम्रा कपालहरू पनि लगाउँछ।
स्पार्स भरेर थप परिभाषित ब्राउजहरू सिर्जना गर्नुहोस्, सुपर-स्किनी टिपले अति उत्तम लाइनहरू कोर्दछ, जसले तपाईंलाई प्राकृतिक ब्रो! कपालको दृश्य सिर्जना गर्न अनुमति दिँदछ!
तपाईंको कमानाहरू कहिल्यै राम्रो देखिने छैन तपाईंले तिनीहरूलाई यो क्रीमयुक्त, उच्च पिग्मेन्ट माइक्रोले भर्नु भए पछि भौं पेन्सिल!
वस्तुको नाम भौं पेन्सिल
Smo. सहज र लागू गर्न सजिलो
अघिल्लो: शाकाहारी हाइलाइटर निजी लेबल मेकअप कस्टम हाइलाइटर मेकअप निजी ओएम हाइलाइटर प्यालेट
भौं पेन्सिल मेकअप निजी लेबल
भौं पेन्सिल माइक्रो पेन
भौं पेन्सिल निजी लेबल
भौं पेन्सिल निजी लेबल कस्टम
भौं पेन्सिल जलरोधक
निजी लेबल भौं पेन्सिल